Liiska Software ee aan dib u eegay - Gofumed
Luulyo, 2009 Geospatial - GIS, INDEX, egeomates My
Waxaan dhawaan la hadlay macnaha waxa ay ka dhigan tahay tirakoobka si looga hadlo software, gaar ahaan Barnaamijyada 11 taas oo matalaysa 50% ee booqashooyinka ku yimaadda erayga muhiimka ah. Way adag tahay in la siiyo talooyin oo software waa ka fiican, maxaa yeelay waxa ay ku xiran tahay xaaladaha kala duwan ee macnaha guud (iyo lacag), ugu Waxaan rajeynayaa kartaa waa in ay qoraan oo sheego dareenkayga oo, si ay dadka kale u sameeyaan. Piteously isagoo blog a, ku dhegyadii qoraaga yihiin asalka ah ee ka kooban, sida dareen kaftan, samir, sarbeeb, iyaga oo aan dunida noqon kartaa dheeraad ah oo waaqiciga ah ... laakiin ma blog a waa in aad (ugu yaraan this) saaraan Raalli ahaanshaha (waxaa sababtoo ah waxaa loogu talagalay) in ka badan sacab.
6 jecel Waxaa jira lix barnaamij oo aan had iyo jeer ku hadlo, kuwaas oo noqday kuwa ugu cadcad; mararka qaarkood in badan oo la isticmaalo marka loo eego qanacsanaanta ama sida J u sheegi lahaa, in badan oo ka mid ah caado ka badan raaxada. Si aad u kala soociso nidaamka waxyaabaha aan sameeyay bogagga tusmada. Barnaamijyadan 6 waa:
post The 178 tixraac ma aha oo kaliya in ay qalab aasaasiga ah, laakiin AutoCAD Map, Civil 3D, Softdesk 8, AutoCAD WS, CivilCAD, Plex.Earth iyo post kale waa arin kale laakiin waxa ay ku lug leeyihiin. Waxaa aad loo jecel yahay, iyo qalab ugu horeysay CAD oo kulmay ciidda isticmaali barnaamijkan si joogto ah. Inkastoo AutoCAD waxaa jira blogs badan iyo forums, kooxda martida ah inta badan halkan u yimid kuwaas oo doonaya in ay ogaadaan sida ay u soo bixi AutoCAD ...
Like AutoCAD, ka qalab aasaasiga ah marka laga reebo Waxaan la hadlay oo ku saabsan Bentley Map, Microstation Geographics, Descartes, Bentley Cadastre iyo inta kale ee dunida. In times qaar ka mid ah waxaan ka dhigay isbarbardhiga labada marks, taariikhda qaar ka mid ah iyo naqdin qaababka ay.
Sababtoo ah caansaanka ma aanan ka tegin, inkasta oo aysan ahayn doorbidadayda sababaha qiimaha ganacsiga. Sababtoo ah caado ixtiraamida xuquuqda daabacaadda, waxaan doorbidaa inaan isticmaalo Open source ama qalab yar oo qiimo jaban.
Manifold GIS (boostada 89)
Waxaan ka faa iidaystay qalabkan, sababtoo ah in ay si joogto ah u isticmaalaan.
Tani waxay soo daahday barta blogka, inkasta oo ay i soo dhaweeyeen dhawaanahan. Heerka sahayda furan ee furan, waxaan xushmeynayaa joogtaynta muddada dhexe, illaa iyo inta horumarka iyo isbahaysigu hoos u dhacaan.
Google Earth (boostada 172)
Uma muuqdo sidan, laakiin wax badan ayaan ku qoraa Google Earth marka la barbar dhigo barnaamijyada kale, inkasta oo ay had iyo jeer la dhexgalaan iyaga ama codsiyada websaydhka. Inkasta oo aysan ahayn qalab caadi ah oo GIS ah, hubaal magaceedu wuxuu xaqiijin doonaa sigaarcabka hadda socda ee lagu magacaabo neogeography.
Barnaamijyada GIS ama barnaamijyada la xiriira dib u eegista ka kor ku xusan marka laga reebo, aan ku sameeyey barnaamijyada kale, qaar ka mid ah iyaga ka mid ah u qalmaan ka sii badan intii post a fudud, kuwa kale waa shaqo la xidhiidha codsiyada GIS:
Qis, sida ugu fiican ee ilaha furan
uDig, horumar fiican, laakiin xadidan
MapInfo, xooggan, laakiin ...
Khariidadda Caalamiga ah, waxaa sii kordhaya wax badan
Cadcorp, Xariiq alaabta GIS
Sitch Maps ... download images laga helo Google Earth
ContouringGE ... jaangooyooyinka heerka ee Google Earth
Tilmaamaha sawirka, codsi dhameystiran
Integeo, Sirdoonka Ganacsiga
MapExport, Isdhexgalka khariiradaha Google
Fdo2fdo, qaab beddelaad ah
MapSuite, Xariiq alaabta GIS
Erdas Titan ... wada hadal iyo wadaag xogta
MapServer, daabacaadda webka
TatukGis Viewer, oo ah xog-haye xog badan
Barnaamijyada kale ee CAD Marka la eego CAD, faallooyinkaygu waxay ku jiraan:
TopCAD, Aad u fiicantahay Dhulka iyo qaabeynta
ArchiCAD, ayaa leh qaybta ay la leedahay xiriirka 8
BitCAD, laga bilaabo line IntelliCAD
ProgeCAD (IntelliCAD), doorbidadayda halkan
eCAD Lite, doorasho Microstation ah
QCAD, ikhtiyaar u ah Linux iyo Mac
Geo5, CAD ayaa lagu dabaqay farsamooyinka ciidda
AnyDWG, si aad u badasho faylasha dwg
Sawir gacmeed ... laga bilaabo sawirada ilaa modelada 3D
FastCAD, laga bilaabo abuuraha of version ugu horeysay ee AutoCAD
CAD Explorer, si aad u raadiso faylasha CAD sida Google
Ates, xal CAD ah Mac iyo Linux
AutoCAD WS, AutoCAD oo ka socda internetka
Alibre, ugu fiican ee farsamada farsamada 3D
PlexEarth Qalabka, kordhinta si ay ugu xirmaan AutoCAD Google Earth
CivilCAD, codsiyada ku saabsan AutoCAD for Engineering Engineering iyo Sahan
Barnaamijyo la mid ah Google Earth
ArcGIS Explorer, fiican laakiin culus
NASA World Wind, sidoo kale, laakiin Java (gaabis ah)
MapJack, oo bedel u ah Muuqaalka Waddada
dalwaddii Earth, macluumaad badan oo ka jira wadamada qaarkood
Qaar kale ayaa lagu soo sheegey iyadoo la adeegsanayo dib-u-eegis ama isticmaal fudud, oo ka mid ah:
Maareeyaha Dossier ... maareynta dokumantiga
SodelsCot, ... si aad u badasho qoraalka codka
Live Writter Live ... si aad u blogto bahalka
Vuze ... isticmaalka iyo khaladaadka
Google Crhome ... la soco farxad
CardRecovery ... markii SD uu dhaawac gaaray
Earthplot ... garaafyada Google Earth
MapinXL, ... khariidado laga bilaabo Excel
Woopra, si ay ula socdaan blogs waqtiga dhabta ah
Codecompare, si loo barbardhigo dukumentiyada
XYZtoCAD, si loo dhexgalo AutoCAD leh Excel
TeamViewer, taageerada fog ee internetka
Xafiiska MobileMapper, si aad dib ugu dhigto xogta GPS
Iyada oo ay ka imanayaan qalab this yimid xal cusub, fudud laakiin waxtar leh oo sida xaqiiqada ah waxay ku koraan doonaa tirada.
Blog, si ay uga qoraan Ipad
Gaia GPS, si ay u qabsadaan jidadka
Bartamaha 2011, haddii aan soo koobno, 56 wuxuu u muuqdaa wax badan, laakiin lixda koob ee ugu horreeya waxa ku jira mugga ugu weyn. Qaar badan oo ka mid ah kuwa kaleba waxay haystaan ​​boosteejo.
Barnaamijyada Software %
Barnaamijyada la doorbido 6 11%
Barnaamijyada kale ee GIS 15 27%
Barnaamijyada kale ee CAD 14 25%
Barnaamijyo la mid ah Google Earth 5 9%
Barnaamijyada kale 14 25%
Codsiyada Ipad 2 4%
Post Previous«Previous 3 waxay rabtaa maanta
Post Next Geo web Publisher, waxay u muuqataa mid fududNext »
4 Jawaab ah "Liiska Barnaamijka ee aan dib u eegay"
Guud ahaan waa software fiican. In kasta oo uusan lahayn PitneyBowes hadana waxay ku jirtay booska lixaad ee qaybta isticmaalka, dhowaanahan horumar badan ayaa la sameeyay, laakiin wali waa wax aan la aqoonsaneynin macnaha guud ahaan Hispanic.
Nestor Nieves isagu wuxuu leeyahay:
Ma taqaanaa MapInfo GIS? Ma aanan arkin tixraacyada SIG
Waxaad ka soo degsan kartaa bogga Ashtech
Oswaldo isagu wuxuu leeyahay:
Hola, tal que, Anigu waxaan haystaa 6 a mapper mobile, laakiin kii wax ka iibin i siiyey ma software ah ee nashqadaynta mobile ama beerta khariidaynta mobile, waxaan arkaa keeni karaan barnaamijyada si kor xogta iyo GPS, uu leeyahay oo kaliya mobile daaqadaha laakiin waxaan ka qaadaan barnaamijka si aad u shaqaynayaan sida GPS?
Haddii aysan kaliya u shaqeyn sida timirta